▷ I-KITS ye-aquarium enhle yabaqalayo, iyiphi okufanele uyikhethe? | Okwezinhlanzi
Amakhithi we-aquarium aphelele afanele ukuqala ngawo, okungukuthi, kubalandeli bomhlaba wezinhlanzi kanye nama-aquariums abafuna ukuqala ukuba ne-aquarium yabo. Ngamanani aphansi, amakhithi afaka uchungechunge lwezinto ezizokwenza impilo yakho ibe lula futhi ezokwenza indlela yakho yokuthola i-aquarium ephelele.
Kulesi sihloko ku-aquarium ephelele sizobona ukuthi la ma-aquariums ahloselwe ukuthi yiziphi, yiziphi izinto ezivame ukuzifaka nezinhlobo zazo ezihlukile, phakathi kwabanye. Ngaphezu kwalokho, futhi sincoma ukuthi ufunde le enye indatshana emayelana ne- izinga lokushisa le-aquarium, enye into ewusizo kakhulu (futhi eshibhile) ukuqinisekisa ukuthi izinhlanzi zakho ziphilile.
1 Amakhithi we-aquarium amahle kakhulu ongaqala ngawo
2 Obani amakhithi we-aquarium ephelele ahloselwe?
3 Yini okufanele ibe nayo ikhithi ye-aquarium
3.2 Izibani ze-LED
4 Izinhlobo zamakhithi we-aquarium
4.2 Ama-40 amalitha
4.3 Ama-60 amalitha
4.4 Ama-100 amalitha
5 Ungayibala kanjani ukuthi zingaki izinhlanzi ezizongena ku-aquarium
5.1 Usayizi wezinhlanzi
5.2 Ubulili bezinhlanzi
5.3 Izimila nezinsiza
6 Ungathenga kuphi ithengi eliphelele le-aquarium?
Amakhithi we-aquarium amahle kakhulu ongaqala ngawo
I-Akkua Aquarium Fish Tank ...
IMarina - Ikhithi ye-Aquarium ...
I-JBL PROCLEAN Aqua IN-out ...
Obani amakhithi we-aquarium ephelele ahloselwe?
Amakhithi we-aquarium aphelele afanelekile ukuqala ngawo, yingakho enzelwe ikakhulukazi labo bathandi bezinhlanzi abangahlali isikhathi eside. futhi badinga umkhiqizo ohlanganisa wonke amathuluzi adingekayo ukuze uqalise.
Njengoba sizobona ngezansi, ama-kits ngokuvamile afaka uchungechunge lwezinto eziyisisekeloYize, ngokuya ngekhwalithi (nentengo) ye-aquarium, la mathuluzi angaba yisisekelo futhi alula noma afake enye into, njengokuhlobisa, ifenisha ...
Into enhle ngokukhetha ikhithi lapho uqala kule ndlela entsha yokuzilibazisa ethokozisayo ukuthi ngeke nje sibe nezisekelo zokuqala kuphela, kodwa njengoba isikhathi sihamba singakhetha ukuthuthukisa lezo zinto esizikhethayo ku-aquarium yethu ngaphandle kokwenza utshalomali oluphakeme kangaka kwezomnotho.
Yini okufanele ibe nayo ikhithi ye-aquarium
Amakhithi we-Aquarium angafaka izinto eziningi, kepha Okuyisisekelo kakhulu (futhi okufanele ukuqaphele kungokwekhwalithi engcono) yilokhu okulandelayo:
Into ebaluleke kakhulu ye-aquarium (ngaphandle kwenhlanzi, kunjalo) isihlungi. Ngokubanzi, yikho okuhlukanisa i-aquarium namathangi ezinhlanzi, ngoba kulezi kufanele uguqule ngokuphelele amanzi, ngenkathi isihlungi sinesibopho sokuyihlanza ukuze siyibuyisele ihlanzekile ku-aquarium. Kulokhu isebenzisa, ngaphezu kwemishini, izinto ezinjenge-fiber kakhukhunathi, i-carbon noma i-perlon, into efana nekotini esikhulume ngayo ezinsukwini ezimbalwa ezedlule.
Izihlungi zizinhlobo ezimbili: izindlu zangaphakathi, ezisetshenziselwa ukucwiliswa ngaphakathi kwe-aquarium, zikhonjiswe kuma-aquariums amancane noma aphakathi nendawo, nangaphandle, okukhonjiswe kuma-aquariums amakhulu.
Esikhathini esedlule, ukukhanyiswa kwama-aquariums kwakwenziwa ngamalambu e-halide ensimbi, yize Isikhathi esithile manje, okuningi okuningi kukhethwe ama-LEDHhayi nje ngoba zipholile kakhulu, zikhanyisa imibala eminingi futhi zibukeka zizinhle, kepha futhi ngoba zisebenzisa amandla amaningi futhi zikhiqiza ukushisa okuncane, into izinhlanzi zakho ezizoyithanda.
Empeleni, amalambu ayinto yobuhle e-aquarium yakho, noma ngabe unezitshalo (okungukuthi, i-aquarium etshaliwe) izinto ziyashintsha, ngoba ukukhanya kuyadingeka ukuze izitshalo zikwazi ukwenza i-photosynthesize.
Amakhithi we-aquarium aphelele afaka i-heater yamanzi, ithuluzi eliphila ngokuvumelana negama lalo nokuthi inesibopho sokufudumeza amanzi ezingeni lokushisa olifunayo (Kulula kakhulu kuzodingeka uhlole izinga lokushisa ngesandla, nge-thermometer, kuyilapho okuphelele kakhulu kufaka inzwa evula futhi isebenze i-heater ngokuzenzekelayo). Ama-heater awusizo ikakhulukazi uma uhlala ezindaweni ezibandayo noma uma une-aquarium yezinhlanzi eshisayo.
Izinhlobo zamakhithi we-aquarium
Uma kukhulunywa ngokuthenga ikhithi ye-aquarium, mhlawumbe umbuzo wokuqala ophakamayo kuthi zingaki izinhlanzi esingaba nazo e-aquarium, umbuzo onzima kakhulu kunalokho okubonakala (esigabeni esilandelayo sizozama ukuwuphendula kafushane). Ukulandela nge izinhlobo zamakhithi, ezivame kakhulu Yilezi ezilandelayo:
I-aquarium encane kunazo zonke, imvamisa inesikhala esanele sezinhlanzi ezimbalwa nezinye izitshalo. Zihle kakhulu, ngoba zivame ukuba nezinhlobo zokubukisa. Njengoba umthamo wawo wamanzi mncane kakhulu, izesekeli (ngokuyinhloko ipompo nesihlungi) zivame ukuhlanganiswa ne-aquarium, ngaleyo ndlela futhi zithathe isikhala esincane.
I-aquarium enkudlwana, yize isengaphakathi kobubanzi obuphakathi nendawo. Ukuthola inani lezinhlanzi ongazifaka, kuzodingeka ubale ukuthi zingaki izitshalo, amatshe kanye nemihlobiso ongayisebenzisa, kanye nosayizi wesilinganiso sezinhlanzi lapho sezikhulile. Ngokuvamile ukubalwa kungokwezinhlanzi ezi-5, yize ukubalwa kungahluka kuye ngosayizi wenhlanzi. Njengoba engemkhulu kakhulu, la ma-aquariums afaka phakathi isihlungi, futhi mhlawumbe nezinye izesekeli, ngaphakathi.
Ngaphakathi kobubanzi bama-aquariums aphakathi nendawo sithola lawo amalitha angama-60, empeleni bayindlela engcono kakhulu yokuqala. Ama-aquariums amancane namakhulu kunzima ukuphatha, ikakhulukazi ngenxa yobukhulu bawo, ngakolunye uhlangothi, elinye lamalitha angama-60 linenani elifanele ukuqala ngalo, ngoba alilikhulu kakhulu noma lincane kakhulu. Lawa ma-aquariums ngokuvamile aphethe cishe izinhlanzi eziyi-8.
Kukhona ezinye izinketho ezipholile kakhulu lezo faka konke okudingayo. Njengasendabeni yama-aquariums amancane, imvamisa afika asevele efakiwe ku-aquarium. Ezinye zifaka nokukhanyisa kwemini nobusuku ukuze unikeze ukukhanya okufanele kwezinhlanzi nezitshalo zakho.
Ocean Mahhala AT641A Nano ...
Usayizi omkhulu kakhulu, lapho cishe izinhlanzi eziyi-12 zinganela, yize, njengokujwayelekile, kuzoya ngosayizi wezilwane, isikhala okuhlala kuso izesekeli ... La ma-aquariums awasagxili kangako kubaqalayo, kepha asekhonjwa kwabaqalisiwe. Izesekeli, njengesihlungi, azisafakwa futhi kwesinye isikhathi zangaphandle, uphawu olusha lokuthi alutholakali kuwo wonke umuntu.
IMonsterShop - Fishbowl ...
Ama-aquarium anefenisha, Ngaphezu kokuba enye yezinto ezibiza kakhulu ohlwini, zifaka ifenisha efane nezilinganiso ze-aquarium. Okuthakazelisa ngempela ngalezi zinhlobo ukuthi efenisha ungaba nazo zonke izesekeli ozidingayo, ngaphezu kwalokho, kukhona lezo ezifaka uhlelo lokuchichima okuphuthumayo nakho konke. Ngaphandle kokungabaza, indlela engcono kakhulu futhi yobuhle yokuba ne-aquarium yakho.
Ama-aquariums asolwandle Kunzima kakhulu ukuzigcina, ngoba ziyizinhlanzi ezintekenteke kakhulu futhi kufanele ube namanzi azinzile kakhulu, noma yonke imvelo ingaphazamiseka. Noma kunjalo zihle kakhulu futhi ziyamangalisa. Lokho kusho ukuthi kunamakhithi we-aquarium yasolwandle akunikeza amathuluzi okuqala ozowadinga ukuwahlanganisa, njengohlelo lokuhlunga kanye ne-dimmer elungiselelwe ngaphambili.
Ukutholwa kweTetra AquaArt ...
Ama-aquariums ashibhile anezinto ezimbili ezifanayo: banamanzi amancane futhi bangamanzi angenasawoti. Uma ungafuni ukwenza impilo yakho ibe nzima kakhulu futhi uzoba nezinhlanzi ezimbalwa nje, lezi yisixazululo esihle. Kumele uqiniseke ukuthi banesistimu enhle yokuhlunga futhi ubagcine behlanzekile. Vele, uma isinambuzane sikuluma futhi ufuna ukuthenga izinhlanzi eziningi, uzodinga i-aquarium enkudlwana.
Ungayibala kanjani ukuthi zingaki izinhlanzi ezizongena ku-aquarium
Uma kukhulunywa ngokubala zingaki izinhlanzi ezizongena ku-aquarium yakho, umthetho ovame kakhulu ukuthi isentimitha elilodwa lezinhlanzi lilingana nelitha ngalinye lamanzi. Kungakho kuzodingeka wenze uchungechunge lwezibalo ngokususelwe kokulandelayo:
Ngokwemvelo, ubukhulu bezinhlanzi yinto yokuqala okufanele ibhekwe lapho kubalwa ukuthi zingaki ezizolingana ku-aquarium. Njalo yenza ukubala kususelwa kusayizi wabantu abadala inhlanzi ezofinyelela kuyo (izikhathi eziningi, uma uzithenga, zisencane futhi aziqedanga ukukhula. Futhi, kuya ngohlobo lwamanzi uzokwazi ukubeka izinhlanzi eziningi noma ezimbalwa Isibonelo, ku-aquarium yasolwandle ingxenye ilitha elilodwa lamanzi nge-sentimitha ngalinye izinhlanzi ezililinganisayo, kanti amanzi amasha ayingxenye, amasentimitha angu-0,5 ngelitha ngalinye lamanzi.
Isizathu silula: uma unezinhlanzi zesilisa nezinsikazi, bese uzishiya ngokuthanda kwazo, zizokhula kabusha, Ngalokho ngesikhathi esifushane uzoba ne-aquarium yonkana. Izinhlanzi eziningi kakhulu zingaholela hhayi kuphela ekamelweni elincane lokubhukuda, okungaholela ekulweni nendawo, kepha futhi nasekukhuphukeni kwemfucumfucu (njengodoti) isihlungi esingenakumunca, okungathinta ikhwalithi yamanzi futhi, ngenxa yalokho, impilo yezinhlanzi zakho.
Ekugcineni, izitshalo nezesekeli (ezifana nezithombe) ozozifaka e-aquarium nazo zidlala indima lapho kubalwa ukuthi zingaki izinhlanzi ezizongena ku-aquarium yakho, ngoba zizothatha isikhala (zishiya indawo encane yokubhukuda) futhi zingakhiqiza imfucuza (okungenani izitshalo eziphilayo). Okufanayo kwenzeka ngo-gravel ezansi, kuzodingeka ubale ukuthi bangakanani ivolumu abakuyo ukwenza ukubala kokugcina.
Ungathenga kuphi ithengi eliphelele le-aquarium?
Ungathola ama-kits aquarium aphelele, athengisiwe noma cha, ezindaweni ezimbalwa. Okuvame kakhulu futhi kunconywe okulandelayo:
AmazonNgenxa yenani lama-aquariums ahlukene nezintengo, cishe unenketho oyifunayo. Ngaphezu kwalokho, okunye okufanele ukukhumbule ukuthi inohlelo oluhle kakhulu lwezokuthutha, ikakhulukazi uma unenkontileka ngenketho yeNdunankulu, ngakho-ke uzoba ne-aquarium ekhaya cishe akunasikhathi.
En izitolo ezinkulu ezifana neCarrefour Kukhona nezinketho ezithokozisayo, noma kungenjalo ukwehluka okuningi njengakwezinye izindawo. Ukuze uthole ukunikezwa okuhle kakhulu, yazi iwebhu, ngoba kunezinketho ezithandekayo ze-inthanethi nezaphulelo ezinhle kakhulu.
Okokugcina, ku izitolo ezikhethekile zezilwane ezifuywayo NjengoKiwoko uzothola ama-aquariums amaningi ahlukene. Kunconywa kakhulu ukuthi uvakashele isitolo sangempela uma uthenga i-aquarium okokuqala ngqa, ngoba abathengisi babo bangasiza kakhulu uma unanoma yimuphi umbuzo odinga ukuphendulwa.
Ama-kits e-aquarium aphelele afanele ukuqala ngawo ngoba anawo wonke amathuluzi adingekayo wokuhlanganisa isiqeshana sakho somfula (noma ulwandle). Siyethemba ukuthi le ndatshana ibe usizo kuwe. Sitshele, ngabe kukhona ikhithi oyithengile ozoyiqala noma uqale ukuyikhahlela? Ungakanani usayizi nezinhlobo ozincomayo? Kube yini isipiliyoni sakho?
Indlela ephelele ye-athikili: Okwezinhlanzi » Izesekeli » I-aquarium ephelele